Abheri wemuBhaibheri, “Kunyange Zvazvo Iye Akafa, Achiri Kutaura”| Kutenda Kwechokwadi
1. Chii chaitadzisa mhuri yaAdhamu naEvha kupinda mumunda weEdheni, uye chii chaidiwa naAbheri kupfuura chero chii zvacho?
ABHERI akatarisa boka rake remakwai aifura ari muchikomo. Zvimwe akabva atarisa nechekure kwaaigona kuona chiedza chisina kunyanya kujeka. Aiziva kuti ikoko kwaiva nebakatwa raibvira moto richitenderera nguva dzose, richiita kuti pasave neanopinda mumunda weEdheni. Vabereki vake vaimbogara imomo, asi ivo kana vana vavo vakanga vasingachakwanisi kupindamo. Fungidzira kamhepo kanoitika zuva rorereka kachipeperetsa bvudzi raAbheri sezvaakatarisa mudenga achifunga nezveMusiki wake. Ukama hwevanhu naMwari hwaizombogadzirisika here? Hapana chimwe chaidiwa naAbheri kupfuura izvozvo.
2-4. Abheri anotaura sei nesu nhasi?
2 Abheri anotaura newe nhasi. Unomunzwa here? Ungati izvozvo hazvimbofi zvakaitika. Handiti mwanakomana uyu wechipiri waAdhamu akafa kare kare. Muviri wake wakaparara kare chaiko uye pava nemakore anenge 6 000 afa. Nezvevakafa, Bhaibheri rinotidzidzisa kuti: “Havana kana chavanoziva.” (Mup. 9:5, 10) Uyewo, hapana kana shoko rimwe chete rakataurwa naAbheri rakanyorwa muBhaibheri. Saka angataura sei nesu?
3 Muapostora Pauro akafuridzirwa kuti ataure izvi nezvaAbheri: “Nokutenda kwacho, kunyange zvazvo iye akafa, achiri kutaura.” (Verenga VaHebheru 11:4.) Abheri anotaura nesu kuburikidza nei? Kuburikidza nokutenda. Abheri aiva munhu wekutanga kuva neunhu ihwohwo hwakanaka zvikuru. Aiva nokutenda kwakasimba zvokuti muenzaniso wake mupenyu uye tinogona kuutevedzera nanhasi. Kana tikadzidza kubva pakutenda kwake toedza kukutevedzera, zvinobva zvaita sokuti Abheri ari kutaura nesu.
4 Zvisinei, chii chatingadzidza nezvaAbheri nokutenda kwake nepo pachingova nezvishomanana zvinotaurwa nezvake muBhaibheri? Ngationei.
Kukura Panguva ‘Yokuvambwa Kwenyika’
5. Jesu airevei paakataura nezvaAbheri seakararama panguva ‘yokuvambwa kwenyika’? (Onawo mashoko omuzasi.)
5 Abheri akaberekwa nguva pfupi pashure pekunge vanhu vekutanga vasikwa. Jesu akazotaura nezvaAbheri seakararama panguva ‘yokuvambwa kwenyika.’ (Verenga Ruka 11:50, 51.) Zviri pachena kuti Jesu aireva nyika yevanhu vangangodzikinurwa pachivi. Kunyange zvazvo Abheri aiva munhu wechina kurarama panyika, zvinoita sokuti ndiye aiva wekutanga kuonekwa naMwari seanodzikinurika. * Zviri pachena kuti Abheri akakura asina kana muenzaniso wakanaka wokutevedzera.
6. Abheri aiva nevabereki vakaita sei?
6 Kunyange zvazvo vanhu vakanga vasati vararama kwenguva refu, vainge vatova mumamiriro ezvinhu asingafadzi. Vabereki vaAbheri, Adhamu naEvha vanofanira kunge vaiva vanhu vane chitarisiko chakanaka uye vakagwinya. Asi vakanga vatadza zvikuru uye vaitozviziva. Vaimbova vanhu vakakwana, vachitarisira kurarama nokusingaperi. Vakabva vapandukira Jehovha Mwari ndokudzingwa mumusha wavo waiva Paradhiso mumunda weEdheni. Nemhaka yokuti vakanyanya kukoshesa zvishuvo zvavo kupfuura zvinhu zvose—kunyange zvaidiwa nevana vavo—vakava vanhu vasina kukwana uye vakarasikirwa neupenyu husingaperi.—Gen. 2:15–3:24.
7, 8. Evha akatii pakaberekwa Kaini, uye angangodaro aifunga nezvechii?
7 Pavakanga vadzingwa mumunda, Adhamu naEvha vakaomerwa neupenyu. Asi pakaberekwa mwana wavo wekutanga, vakamutumidza kuti Kaini kana kuti “Chinhu Chakaberekwa,” uye Evha akati: “Ndabereka munhu ndichiyamurwa naJehovha.” Mashoko ake anopa pfungwa yokuti angangodaro aifunga nezvevimbiso yakaitwa naJehovha mumunda, achifanotaura kuti paizova nemukadzi aizobereka “mwana,” uyo rimwe zuva aizoparadza akaipa uyo akanga atsausa Adhamu naEvha. (Gen. 3:15; 4:1) Evha aifungidzira kuti ndiye mukadzi womuuprofita hwacho here uye kuti Kaini ndiye aiva “mwana” akapikirwa?
8 Kana aifungidzira kudaro akanga akarasika zvikuru. Uyewo kana Adhamu naEvha vaiita kuti Kaini ave nepfungwa dzakadaro paaikura, vangangodaro vakaita kuti azvionere pamusoro. Nekufamba kwenguva, Evha akabereka mwanakomana wechipiri, asi hatiwani mashoko anopa pfungwa yokuti ndiye aiva mwana akapikirwa. Vakamutumidza kuti Abheri, zvinogona kureva kuti “Befu,” kana kuti “Kusava Nematuro.” (Gen. 4:2) Zita iroro ravakamupa rairatidza kuti vaitarisira zvishoma kubva kwaari here, sokunge kuti Kaini ainyanya kukosha kupfuura Abheri? Zvingangodaro, asi hatina chokwadi nazvo.
9. Mazuva ano vabereki vanogona kudzidzei kubva kuvabereki vedu vekutanga?
9 Mazuva ano vabereki vanogona kudzidza zvakawanda kubva kuvabereki ivavo vekutanga. Kuburikidza nezvamunotaura uye zvamunoita, muchaita here kuti vana venyu vave vanhu vanozvikudza, vanoda kuva nemukurumbira uye vane udyire? Kana kuti muchavadzidzisa kuti vade Jehovha Mwari here uye kuti vave neushamwari naye? Zvinosuruvarisa kuti vabereki vokutanga vakatadza kuita basa ravo nemazvo. Asi paiva netariro kuvana vavo.
Chii Chakabatsira Abheri Kuti Ave Nokutenda?
10, 11. Kaini naAbheri vakaita mabasa erudzii, uye Abheri akasvika pakuva neunhu hupi?
10 Kaini naAbheri pavaikura, Adhamu angangodaro akavadzidzisa mabasa aikosha pakuraramisa mhuri. Kaini akava murimi; Abheri akava mufudzi wemakwai.
11 Zvisinei, Abheri akaita chimwe chinhu chaitonyanya kukosha. Nokufamba kwenguva, akava nokutenda—unhu huya hwakanaka hwakazonyorwa nezvahwo naPauro. Pafunge! Abheri akanga asina munhu waaidzidza kwaari. Saka akasvika sei pakuva nokutenda muna Jehovha Mwari? Ngationei zvinhu zvitatu zvinofanira kunge zvakamubatsira kuva nokutenda kwakasimba.
12, 13. Kucherechedza zvisikwa zvaJehovha kungava kwakabatsira sei Abheri kuti akure mukutenda?
12 Zvisikwa zvaJehovha. Ichokwadi kuti Jehovha akanga atuka nyika, zvichiita kuti imere minzwa norukato izvo zvaikanganisa kurima. Asi nyika yaibereka zvokudya zvakawanda zvaiita kuti vemumhuri yaAbheri vararame. Uye mhuka dzakanga dzisina kutukwa, kusanganisira shiri nehove; uyewo makomo, madziva, nzizi nemakungwa hazvina kutukwa; ndizvo zvimwe chetewo nematenga, makore, zuva, mwedzi nenyeredzi. Kwose kwaaitarisa, Abheri aiona uchapupu hwerudo rukuru, uchenjeri uye kunaka kwaJehovha Mwari, uyo akasika zvinhu zvose. (Verenga VaRoma 1:20.) Hapana mubvunzo kuti kufungisisa pamusoro pezvinhu zvakadaro kwakasimbisa kutenda kwaAbheri.
Kubva pane zvakasikwa, Abheri akava nezvikonzero zvakasimba zvekutenda muMusiki ane rudo
13 Chokwadi Abheri akava nenguva yekufunga nezvaJehovha. Ita seuri kumuona achifudza boka rake remakwai. Basa remufudzi wemakwai raida kuti munhu afambe zvikuru. Aiatungamirira nemuzvikomo, nemumipata, achiyambuka nzizi, uye aigara achitsvaka uswa hwakasvibirira, nzvimbo dzakanakisisa dzaiwanika mvura, uye nzvimbo dzokuzororera dzaiva nemimvuri yakanakisisa. Pazvisikwa zvose zvaMwari, makwai ndiwo aiita seainyanya kuda kubatsirwa, sokunge kuti akasikirwa kuti atungamirirwe uye adzivirirwe nevanhu. Abheri aiona here kuti iye aidawo kutungamirirwa, kudzivirirwa uye kutarisirwa naMwari ane uchenjeri hwakakura uye ane simba zvikuru kupfuura chero munhu upi zvake? Hapana mubvunzo kuti aitaura pfungwa dzakadaro paainyengetera, uye zvakaita kuti kutenda kwake kurambe kuchikura.
14, 15. Zvipikirwa zvaJehovha zvakaita kuti Abheri ave nezvinhu zvipi zvokufungisisa?
14 Zvipikirwa zvaJehovha. Adhamu naEvha vanofanira kunge vakaudza vanakomana vavo zvakaitika mumunda weEdheni zvakazoita kuti vadzingwe. Saka Abheri aiva nezvakawanda zvokufungisisa.
15 Jehovha akataura kuti nyika yaizotukwa. Abheri aigona kuona zvakajeka minzwa nerukato zvaizadzisa mashoko iwayo. Jehovha akafanotaurawo kuti Evha aizorwadziwa nepamuviri uye pakusununguka. Paiberekwa vana vakasiyirwa naAbheri, hapana mubvunzo kuti akaona kuti mashoko iwayo aizadzikawo. Jehovha akafanoona kuti Evha aizonyanya kuda kuratidzwa rudo uye kuitirwa hanya nemurume wake uye zvaizoita kuti Adhamu amutonge. Abheri aitarisa zvose izvi zvichiitika kuvabereki vake. Pane zvose zvaiitika, Abheri aiona kuti muromo waJehovha hauwiri pasi. Saka Abheri aiva nezvikonzero zvakasimba zvokutenda muchipikirwa chaMwari chaitaura nezvembeu, kana kuti “mwana,” uyo rimwe zuva aizogadzirisa zvikanganiso zvakanga zvatangira muEdheni.—Gen. 3:15-19.
16, 17. Abheri angangodaro akadzidzei kubva pamakerubhi aJehovha?
16 Vashumiri vaJehovha. Abheri haana kana mienzaniso yakanaka yaakawana mumhuri yevanhu, asi vanhu vainge vasiri ivo voga zvisikwa zvakangwara zvaiva panyika panguva iyoyo. Adhamu naEvha pavakadzingwa mumunda wacho, Jehovha akava nechokwadi chokuti ivo kana kuti vana vavo vaisazokwanisa kupinda muParadhiso iyoyo yaiva panyika. Kuti arinde nzira yaipinda mumunda wacho, Jehovha akaisa makerubhi—ngirozi dzine chinzvimbo chepamusoro—pamwe chete nebakatwa raibvira moto raitenderera nguva dzose.—Verenga Genesisi 3:24.
17 Fungidzira zvazvakanga zvakaita kuna Abheri kuona makerubhi iwayo paakanga ari kakomana. Sezvo makerubhi acho aionekwa aine miviri yevanhu, Abheri aigona kuona kuti aiva nesimba guru. Uye “bakatwa” iroro, rairamba richibvira moto, richigarotenderera, raiitawo kuti atye. Abheri zvaaikura, akamboona makerubhi iwayo achifinhikana here ndokusiya basa rawo? Kwete. Siku nesikati, gore negore, zvisikwa izvozvo zvakangwara, zvine simba zvairamba zviri pabasa razvakapiwa. Saka Abheri akadzidza kuti Jehovha Mwari aiva nevashumiri vakarurama uye vakatendeka. Mumakerubhi iwayo, Abheri aigona kuona kuvimbika kuna Jehovha uye kumuteerera zvaaisagona kuwana mumhuri yake. Hapana mubvunzo kuti muenzaniso iwoyo wengirozi wakasimbisa kutenda kwake.
Kwoupenyu hwake hwose, Abheri aigona kuona kuti makerubhi aiva vashumiri vaJehovha vakatendeka uye vanoteerera
18. Tingavakira kutenda kwedu pachii mazuva ano?
18 Abheri akaona kuti kutenda kwake kwairamba kuchiwedzera kusimba paaifungisisa zvose zvakaratidzwa naJehovha kuburikidza nezvakasikwa, zvipikirwa zvake, uye mienzaniso yengirozi dzake. Handizvo here kuti muenzaniso wake unotaura nesu? Zvikurukuru vechiduku vangakurudzirwa nokuziva kuti vanogona kuva nekutenda kwechokwadi muna Jehovha Mwari, pasinei nezvinoitwa nevemumhuri mavo. Tine zvikonzero zvakakwana zvokuva nekutenda mazuva ano nekuti tinoona zvakasikwa zvakatipoteredza, tine Bhaibheri rakazara uyewo tine mienzaniso yakawanda yevanhu vaiva nekutenda.
Chibayiro chaAbheri—Nei Chaiva Nani?
19. Nokufamba kwenguva, Abheri akazoziva chokwadi chipi chinokosha?
19 Kutenda kwaAbheri muna Jehovha zvakwaikura, aida kuwana nzira yokuita zvairatidza kutenda kwake. Asi munhuwo zvake aizopa chii kuMusiki wezvinhu zvose? Zviri pachena kuti Mwari aisada chero chipo kana rubatsiro kubva kuvanhu. Nokufamba kwenguva, Abheri akazoziva chokwadi chinokosha chokuti: Baba vake vokudenga vane rudo vaizofara kana aizongovapa chinhu chakanakisisa kubva pane zvaaiva nazvo aine vavariro yakanaka.
Abheri akapa chibayiro chake nokutenda; Kaini haana kudaro
20, 21. Kaini naAbheri vakapa zvinopiwa zvakaita sei kuna Jehovha, uye iye akapindura sei?
20 Abheri akagadzirira kupa mamwe makwai ake. Akasarudza akanakisisa, akatanga kuberekwa uye nhindi dzaaiona sedzakanakisisa. Panguva iyi, Kaini akatsvakawo kukomborerwa uye kufarirwa naMwari, achigadzira chinopiwa kubva pazvirimwa zvake. Asi vavariro dzake dzakanga dzisina kufanana nedzaAbheri. Musiyano wacho wakazova pachena vaviri vacho pavakapa zvinopiwa zvavo.
21 Vanakomana vaviri vaAdhamu vangangodaro vakashandisa atari nemoto kuti vape zvinopiwa zvavo, zvichida vari pavaionekwa nemakerubhi, ayo aiva chete vamiririri vaJehovha vairarama panyika panguva iyoyo. Jehovha akapindura! Tinoverenga kuti: ‘Jehovha akanga akatarira achifarira Abheri nechinopiwa chake.’ (Gen. 4:4) Bhaibheri haritauri kuti Mwari akaratidza sei kufarira kwake.
22, 23. Nei Jehovha akafarira chinopiwa chaAbheri?
22 Nei Mwari akafarira Abheri? Chaiva chinopiwa chacho here chakaita kuti afarirwe? Abheri akapa chisikwa chipenyu, chinofema achiteura ropa racho raimiririra upenyu. Abheri aiziva here kuti chibayiro chakadaro chaizova chinokosha zvakadini? Papera mazana emakore kubva panguva yaAbheri, Mwari akashandisa chibayiro chegwayana risina kukanganisika kuti afananidzire chibayiro cheMwanakomana wake akakwana, “Gwayana raMwari,” uyo ane ropa risina mhosva raizoteurwa. (Joh. 1:29; Eks. 12:5-7) Zvisinei, Abheri akanga asingazivi kana kunzwisisa zvizhinji zvacho.
23 Chatinonyatsoziva ndeichi: Abheri akapa zvakanakisisa pane zvaaiva nazvo. Jehovha haana kungotarira achifarira chinopiwa chacho chete asi akafarirawo munhu wacho pachake. Achikurudzirwa nekuda kwaaiita Jehovha uye nokutenda kwechokwadi maari, Abheri akapa chibayiro.
24. (a) Nei tichitaura kuti chinopiwa chaKaini chainge chisiri chinopiwa chisina kukodzera? (b) Kaini ainge akafanana nevakawanda mazuva ano munzira ipi?
24 Zvainge zvakasiyana nezvakaitwa naKaini. Jehovha “haana kutombofarira Kaini nechinopiwa chake.” (Gen. 4:5) Kwaisava kuti chinopiwa chaKaini chainge chisina kukodzera; pave paya Mutemo waMwari wakazobvumira kuti zvibereko zvevhu zvishandiswe sezvinopiwa. (Revh. 6:14, 15) Asi Bhaibheri rinotaura nezvaKaini kuti “mabasa ake akanga akaipa.” (Verenga 1 Johani 3:12.) Kufanana nevakawanda mazuva ano, zviri pachena kuti Kaini akafunga kuti kungoratidza nechekunze kuzvipira kuna Mwari kwainge kwakakwana. Kushayiwa kwake kutenda kwechokwadi muna Jehovha kana kuti kusamuda zvakakurumidza kuratidzwa pachena nezviito zvake.
25, 26. Jehovha akapa Kaini nyevero ipi, asi Kaini akaita sei?
25 Kaini paakaona kuti akanga asina kufarirwa naJehovha, akatsvaka kudzidza kubva pamuenzaniso waAbheri here? Kwete. Akavenga munun’una wake kwazvo. Jehovha akaona zvaiitika mumwoyo maKaini ndokuedza kukurukura naye nemwoyo murefu. Akanyevera Kaini kuti zvaiva mumwoyo make zvainge zvichitungamirira kuchivi chakakura, uye Jehovha akamupa tariro ‘yokukwidziridzwa’ kana Kaini aizongochinja nzira dzake.—Gen. 4:6, 7.
26 Kaini haana kuteerera nyevero yaMwari. Akakumbira munun’una wake uyo akanga asina chaaimbofungira kuti vaende vose musango. Vari ikoko, Kaini akarwisa Abheri ndokumuponda. (Gen. 4:8) Nekumwe kutaura, Abheri akabva ava munhu wokutanga kutambudzirwa chitendero, munhu wokutanga kuurayirwa zvaanotenda. Kunyange zvazvo ainge afa, Jehovha akanga asina kukanganwa Abheri.
27. (a) Nei tingava nechivimbo chokuti Abheri achamutswa? (b) Tingava sei nechokwadi chekuzosangana naAbheri rimwe zuva?
27 Nenzira yokufananidzira, ropa raAbheri rakashevedzera kuna Jehovha Mwari kuti atsive kana kuti aruramisire. Uye Mwari akaita kuti pave nokururamisira, achiranga Kaini akaipa pamusana pemhosva yake. (Gen. 4:9-12) Chinotonyanya kukosha ndechokuti nyaya yokutenda kwaAbheri iri kutaura nesu nhasi. Urefu hwoupenyu hwake—zvichida makore anenge 100—hwaiva hupfupi kuvanhu vepanguva iyoyo, asi Abheri akashandisa upenyu hwake zvakanaka. Akafa achiziva kuti aidiwa uye aifarirwa naBaba vake vekudenga, Jehovha. (VaH. 11:4) Saka tinogona kuva nechivimbo chokuti acharamba achiyeukwa naJehovha, achimirira kumutswa kuti ararame muparadhiso yepanyika. (Joh. 5:28, 29) Uchasangana naye imomo here? Unogona kuzosangana naye kana ukatsunga kuteerera Abheri sezvaanotaura uye kutevedzera kutenda kwake kwakakura.
^ ndima 5 Mashoko okuti “kuvambwa kwenyika” ane pfungwa yokuberekana, saka ane chokuita nevana vekutanga-tanga vakaberekwa nevanhu. Zvisinei, nei Jesu akabatanidza Abheri paaitaura nezve“kuvambwa kwenyika” kwete Kaini, uyo aiva mwana wekutanga kuberekwa? Zvisarudzo nezviito zvaKaini zvainge zvakafanana nokupandukira Jehovha Mwari nemaune. Kungofanana nevabereki vake, zvinoita sokuti Kaini ndemumwe wevanhu vasingazomutswi uye vasingazodzikinurwi.
Abheri anotaura sei nesu mazuva ano?
Vabereki vangadzidzei kubva pazvikanganiso zvevabereki vaAbheri?
Zvakasikwa naJehovha, zvaakapikira uye makerubhi ake zvingangodaro zvakabatsira sei Abheri kuti ave nekutenda?
Ungada kutevedzera kutenda kwaAbheri munzira dzipi?
Abheri—“Kunyange Zvazvo Iye Akafa, Achiri Kutaura”